Umhla My Pet » 7 Inyaniso Kwintlekele Malunga Ukuthandana Modern
Dating ibe yinxalenye inkcubeko yasentshona kuba elide. nokuba, owaqala namhlanje yahluke ngokubalulekileyo ayisafani ukuba ebudeni 60s, 70s, 80s kunye 90s.
Ukufika Internet ngayo ukuvela websites ukuthandana ebenegalelo olu tshintsho. Nangona kukho Zininzi izinto ezenza ngcono kwaye inika ihlombe ngakumbi imini ukuthandana yanamhlanje (ukuthandana online ngokuqinisekileyo ngomnye wabo), ubukho aziziqhusheko ngeke walelwe kakhulu. Ngezantsi kukho iinyaniso ezimbi malunga ukuthandana mihla iya kuvumela ukuba uqhelane nabo aziziqhusheko.
1. Abantu baye phantse ndilibele ukuthetha omnye komnye
unxibelelwano lula yenye izipho inkulu ukuba iteknoloji ulungiselele abantu. namhlanje, abantu ngothando ukuze ahlale exhulumene nabanye nokuba ke weekhilomitha kude. nokuba, le phambili iteknoloji nayo ababulele injongo abantu ukuba bathethe.
Ewe, ufunde ngayo ekunene; Abantu abaninzi namhlanje musa izimuncu ukuva ilizwi ndekayo, uthotho lwemiyalezo ebhaliweyo ukwenza umsebenzi kubo. Kuthekani afowune? Oh, ngokuba kuninzi ezo izinto elidlulileyo.
2. Ungoyena, ukuba ningazi
Ufuna ukuba athandwe othile? namhlanje, ndlela ilula yokwenza oko kukuba bengabazi. Uya kubonakala nomtsalane ngakumbi iqabane lakho ukuthandana, ukuba uyakhathala ngaphantsi. Kule mihla, phantse akukho mntu kubonakala ukuba unomdla ngamnye ebonisa umdla.
3. Kuyinto phantse lonke ezikhohlisayo
abasabela zokucazulula phantse nzima kangangoko baxhalabile abantu lilungu sizukulwana sangoku. Umntu ayikho kwaphela gqitha nawe aziphathe ngendlela efanayo kwaye ujongo efanayo / ngobuso bakhe bakhe umntu unomdla ngokwenene kuwe. Abantu abaninzi, namhlanje, ndilibele ukuvakalisa indlela iimvakalelo yaye bacinga ukuba umgangatho.
4. imali, imali nemali kwaye kofika inkangeleko
Le ngxelo ingentla kuyinyaniso ngokuyintloko abantu; kwabasetyhini, kuya kuba ngenye indlela ngeenxa (imbonakalo kufike imali yokuqala uze). Kufuphi, ukuba ngaba lo mntu uthandana nomntu uya kuba nomdla kuwe kuxhomekeke apho kudidi kangangoko baxhalabile kule miba mibini. Ewe, kuphela ezi zimbini; yonke enye into eza emva kwezi.
5. Izinto kakhulu alungelelaniselwe niyathandana
Namhlanje yokulungelelanisa Hangouts uthando sele kulula kakhulu. Wenze ufowune kunye nabaniki nkonzo iya kuququzelela isidlo ikhandlela ukukhanya kuwe. Oku uphelelwe kakhulu charm neyayisetyenziswa ukunxulumana nezicwangciso ezinjalo ngaphambili.
6. Ukuba bucala? Yintoni umgaqo?
Akukho nto yabucala ngokuthandana namhlanje. Wena yomhla umntu kwemini ngokuhlwa uza kubona iifoto ezimbini kuni oyinqakrazileyo kunye kwimidiya omnye umntu zentlalo akhawunti kulandelwa uthotho izimvo kunye namabinzana ezothusayo. Ukuba ngaba kusetyenziswa kuyo, nina aningabo kwesi sizukulwana.
7. Esithi kuphelile ngoku kulula
Nje itekisi kunye neqabane lakho uya kwazi ukuba akukho nomdla kuye / yakhe. Maxa wambi iitekisi nahlukene ziqulethe nje isibini okanye amagama. Ngaba kulula ligqobha ulwalamano ngokwenene?
namhlanje, abantu ngokuqinisekileyo baye ngumonde ngakumbi nje; yokungabikho kwexesha kwakhona idemon enkulu. nokuba, oko ngeke walelwe ukuba nangoku bafuna ukuthandwa nokuthanda. Ngoko ke, ngokukhawuleza ukuze kufika ixesha xa ukuthandana kuba nje uthando kunye umdla njengoko isetyenziswa ukuba ngaphambili.